ReviewInc: Kormeer, Ururinta iyo La wadaag Faallooyinka internetka | Martech Zone
86% dhammaan macaamiisha waxay ku tiirsan yihiin dib u eegista khadka tooska ah markay wax iibsadaan oo 72% waxay dhahaan dib u eegista internetka ayaa ah sababta ugu sareysa ee ay u doortaan ganacsi maxalli ah. Meheradaha martigelinta iyo adeegyada ku saleysan adeegga waxaa lagu aasi karaa dib u eegista khadka tooska ah ee liita. Iyo ganacsi rogaya sumcad xumo internetka ah, uruurinta iyo wadaagida dib u eegista cusub waa waajib. Tan oo gacanta lagu sameeyo dhammaan goobaha dib u eegista waxay noqon kartaa hawl aan macquul ahayn, in kastoo. Gali Dib u eegista.
Dib u eegista waxay bixisaa astaamaha soo socda:
Dib-u-eegista Dabagalka - barnaamijkooda kormeerku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kula socoto dib u eegistaada internetka ee guud ahaan in ka badan 100 goobood oo dib u eegis kala duwan ah waqtiga-dhabta ah oo leh warbixinno faahfaahsan oo maalinle ah
Ururi Faallooyinka - nidaam dib-u-eegis ah oo ururiya jawaab celinta dhammaan macaamiishaada si gaar ah iyada oo si isku mid ah loogu abaalmariyo jawaab celin. Xalkooda otomaatiga ah waa mid saaxiibtinimo leh, kiniin diyaar ah, emayl karti leh, luuqado badan, oo si heer sare ah loo habeyn karo. Nidaamkoodu wuxuu ku socdaa dib u eegista xun ee jawaabta guriga, isagoo tilmaamaya dib u eegista wanaagsan ee wadaagista.
La wadaag Faallooyinka bogagga ugu muhiimsan ganacsigaaga. Tan macnaheedu waa markay macaamiisha raadinayaan meheraddaada, waxay bilaabi doonaan inay arkaan dib u eegista aad doonayso inay ku sameeyaan.
Marqaatiyada iswada - qalab aad ku dhexgalin karto websaydhkaaga.
Tags: avvobingbaaritaanka magaaladaururi dib u eegistaafar geesoodgoogle daraygoobaabin baayacmushtarigaFaallooyinka internetkaratemdReviewsTripadvisoryahoo! deegaanka
Waqti aad u fiican, Mudane Karr. Mahadsanid.
Had iyo jeer jeclahay maqalka taas. Waad soo dhoweyneysaa, Bill!